လေဟာနယ်မဂ္ဂနီစီယမ်ရှဲလ်များအတွက်နည်းပညာ Casting Die China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,အလွိုင်းဖုန်စုပ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die,Semisolid Laptop ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Casting Die
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > semi Solid သေကာစ် > လေဟာနယ်မဂ္ဂနီစီယမ်ရှဲလ်များအတွက်နည်းပညာ Casting Die
လေဟာနယ် ချ. သေဖို့မဂ္ဂနီစီယမ် Shell ဆိုသည်မှာ Semisolid များအတွက်နည်းပညာ Casting Die Semi-အစိုင်အခဲသတ္တုရန်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်လူမီနီယံအလင်းအလွိုင်းပစ္စည်း High-ဖိအားဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောတိကျရှိပါတယျ။ မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းသတ္တုစက်မှုနှင့်လက်တွေ့သတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒါဟာထုတ်ကုန်၏တပြင်လုံးကိုအရည်အသွေးကိုအလင်းအရေအတွက်၏လိုက်စားရောက်ရှိစေနိုင်သည်ကို၎င်း, တည်ငြိမ်ရေးမြင့်မားသည်။ အလွိုင်းဖုန်စုပ်အစိတ်အပိုင်းများအဆိုပါအစိတ်အပိုင်းများ ချ. သေဆုံး Casting Die မြင့်မားသောတိများနှင့်တိကျစွာထုတ်ကုန်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်သင့်လျော်သောကောင်းသောသေ-casting ဖွဲ့စည်းဂုဏ်သတ္တိများသည်, 3C ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုအထူးသဖြင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန် (ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်, စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း, ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးများ ) စက်မှုလုပ်ငန်း။
OEM စိတ်တိုင်းကျမျက်မှန်မျက်မှန်ဘောင်များ Casting Die